एमसीसीको म्याद फेरि थपिने
नेपाल एमसीसीको म्याद फेरि थपिने
निर्धारित समयमा सम्झौता कार्यान्वयन नहुने भन्दै कोभिड– १९ को कारण देखाउँदै सरकारले एमसीसीलाई म्याद थप्ने सहमति भएको छ। एमसीसीको समयअवधिलाई समयअवधिलाई थप गरिने भएको छ ।
सरकारबीच र एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको थालनी (इन्ट्री इन्टु फोर्स) हुने म्याद थप्ने सहमति भएको छ। अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय भएको भन्दै मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल)ले छिटो निर्णय लिन सरकारलाई आग्रह गरेको जानकारी दिएको छ।
यसअन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैं खुला नरहने पनि उसले बताएको छ। राजनीतिक दाउपेचका कारण विवादित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन संसद्मा अड्किएको छ।
गत सातादेखि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सम्झौताको म्याद थपको गृहकार्यस्वरूप पहल गरिरहेका छन्। आवासीय निर्देशक ट्रोय कोफरोथसँग नेपालका लागि एमसीसीका बारे केही दिनअघि छलफल भएको थियो। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले ‘म्याद थपबारे छिट्टै प्रस्ताव तयार हुँदै छ, केही प्राविधिक विषय मिलाउन बाँकी हो’, भने।
कोरोना भाइरसलाई कारण देखाउँदै अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार म्याद थपबारे निर्णय लिने तयारी भए पनि अझै अन्तिम रूप दिइएको छैन।
“सिधा कुरा जनतासँग” बन्द हुँदै, रवि लामिछाने राजनितिमा ?
लोकप्रिय सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने प्रस्तोता रहेको “‘सिधा कुरा जनतासँग’” कार्यक्रम बन्द हुने भएको छ। प्रस्तोता रवि लामिछानेले टेलिभिजन नै छाड्ने निधो गरेपछि सो कार्यक्रम बन्द हुन लागेको हो।
सातामै ४० अर्बको कारोबार, नेप्सेसूचक पाँच दिनमा १ सय ६२ अंक बढ्यो
तिहारयता सेयर बजारले एकपछि अर्को नयाँ रेकर्ड कायम गर्न थालेको छ । यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा हालसम्मको उच्च कारोबार भएको हो ।